Archives des Fenoarivo - Midi Madagasikara
Alakamisy Fenoarivo : Miaramilan’ny RTS ilay hita faty
Redaction Midi Madagasikara 13 mars 2014 Fenoarivo, hita faty, Miaramilan’ny RTS
Fantatra ankehitriny fa miaramila miasa eo anivon’ny toby RTS ilay hita faty tao anaty rano tetsy Alakamisy-Fenoarivo. Rabenarivo Tahina no anarany ary nivoaka tamin’ny andiany faha- 13 teo anivon’ny sekoly fianarana ho manamboninahitra lefitra izy. Raha ny fanazavana azo dia ny zoma lasa teo izy no nisy nahita farany, avy niasa alina ny alakamisy. Loharanom-baovao…
Fenoarivo : Fatin-dehilahy iray hita tao anaty rano
Redaction Midi Madagasikara 12 mars 2014 Fenoarivo
Fatin-dehilahy iray no hitan’ny olona tao amin’ny reniranon’Andromba, eny Alakamisy Fenoarivo, omaly tokony ho tany amin’ny 10 ora tany ho any. Olona sendra nandalo no nahita ny razana. Tonga dia niparitaka ny vaovao ary vetivety dia nitangorona ny mponina. Nisy ny nampandre ny mpitandro filaminana sy ny avy ao amin’ny fokontany. Rehefa tafakatra teny an-tanety…